Zimbabwean presidential election, 2002 - Wikipedia
A presidential election was held in Zimbabwe between 9 and 11 March 2002. The election was contested by the incumbent Robert Mugabe, Movement for Democratic Change leader Morgan Tsvangirai, ZANU-Ndonga leader Wilson Kumbula, Shakespeare Maya of the National Alliance for Good Governance and independent candidate Paul Siwela. Although Mugabe won, claiming 56.2% of the vote, it was the closest presidential election to date. Although the Organisation of African Unity described the election as "transparent, credible, free and fair", the conduct of the election was strongly condemned by the Commonwealth, Norwegian observers, Zimbabwean opposition figures, and Western governments and media.  Zimbabwe was consequently suspended from the Commonwealth for a year. The Khampepe Report, commissioned by South African president Thabo Mbeki, was commissioned at the time to investigate the fairness of the elections. The report said :
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Zimbabwean_presidential_election,_2002&oldid=754144231"	Categories: Presidential elections in Zimbabwe2002 elections in Africa2002 in ZimbabweHidden categories: Pages using deprecated image syntax	Navigation menu
Español	Edit links	This page was last edited on 11 December 2016, at 02:31.